गायक कमल बि.सी.माल्दाई र करिश्मा ढकालको नृत्यमा बबाल मच्चाउने नया तिज गीत बजारमा (भिडियो) — Himali Sanchar
हिमाली सञ्चार संवाददाता
काठमाडौं – पछिल्लो समयका चर्चित युवा गायक कमल बि.सी. माल्दाईको स्वर तथा अभिनयमा नयाँ तिज गीत सार्वजनिक भएको छ । गायक बिसी र सीता बोहराको आवाजमा “नाँच माया लजाउँदै लजाउँदै” बोलको तिज गीत सार्वजनिक भएको हो । छमछमी नचाउने खालको यस गीतमा स्वयं गायक कमल बि.सी. माल्दाई, करिश्मा ढकाल र बैभव अधिकारीले नृत्य तथा अभिनय गरेका छन ।
अहिलेका चर्चित निर्देशक बिक्रम चौहानको निर्देशन रहेको यस गीतको छायाँकन प्रकाश खड्काले गरेका हुन भने सम्पादन राजेश कुमारको रहेको छ । निकै मौलिक धारमा तयार भएको यस गीतको शब्द गायक स्वयं कमल बिसी माल्दाईको रहेको छ भने लय खेम सेन्चुरीको रहेको छ । बागेश्वरी म्युजिकले बजार ब्यवस्थापन गरेको यस गीतको दृश्य निर्माण बि. स्टार फिल्मसले गरेको हो ।
गायक कमल बिसी माल्दाईले गीत निकै मौलिक र छमछमी नचाउने खालको भएकाले सबैले गीत रुचाउने बताउनु भयो । उहाँले आफुले डिजे र समय परिबेशका जति गीतहरु गाएपनि मौलिक धारका गीतहरुलाई आफूले कहिले पनि नबिर्सने बताउनुभयो । गायिक सीता बोहराले आफ्नो दोस्रो तीज गीत सबै स्रोता दर्शकहरुले रुचाउनेमा आफु आशाबादी रहेको बताउनुभयो । गायिका बोहराका छोरा बैभव अधिकारीले यस गीतमा नृत्य समेत गरेका छन ।
यस गीतकी मोडल करिश्मा ढकालले यसबर्ष आफुले नृत्य गरका अन्य गीतहरुमध्ये यो गीतको अडियो नै निकै उत्कृष्ट भएकाले भिडियो झनै उत्कृष्ट बनेको बताईन ।